मानिसको आयु यी ५ कारणहरुले गर्दा घट्ने गर्दछ, जान्नुहोस । – Yuwa Aawaj
बैसाख २७, २०७८ सोमबार 231
आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ । हामी निश्चित आयु लिएर जन्मन्छौं । जन्मेपछि मर्नैपर्छ । तर, हामीले जन्मजात जति आयु लिएर आएका हुन्छौ,
त्यसको पुरा अवधी बाँच्न पाउँदैनौ । सक्दैनौं किनभने जीवन जिउने क्रममा हामीलाई अनेकन रोग लाग्छ । अनेकन शारीरिक, मानसिक झन्झट आइलाग्छ । यस्ता विकारले हाम्रो आयु खियाइदिन्छ । जीवनको उत्तरार्द्ध रोगले थलिएर, जीर्ण भएर कष्टकर जीवन बाँच्छौं । हरेक ब्यक्तिको जन्मपछि मृत्यु निश्चित हुन्छ । जन्मसँगै मृत्युसँगै आउँछ ।
शास्त्रमा मानिसको आयु घट्ने विभिन्न कारण हुन सक्ने उल्लेख छ । केही कामले मानिसको आयु घट्ने र छिटो निधन हुने शास्त्रको भनाइ छ । महाभारतको उद्योग पर्वमा धृतराष्ट्र महात्मा विदुरसँग मानिसको आयु १०० वर्ष भएपनि सबै मानिस १०० वर्ष नबाँच्ने कारणबारे सोध्छन्,
‘शतायुरुक्ता पुरूषः सर्ववेदेषु वै यदा। नाप्नोत्यथ च तत् सर्वमायुः केनेह हेतुना।। त्यतिबेला विदुरले दिएको जवाफ अनुसार ५ कारणले गर्दा मानिसको आयु घट्छ र पूर्ण आयु बाँच्न सक्दैन । वास्तु शास्त्रः एक चिम्टी नुनले तपाइँलाई धनी बनाउन सक्छ ।
५. विश्वासघाती मानिस पनि लामो उमेर बाँच्दैनन् । अरुलाई धोका दिनेको मन अशान्त रहने हुँदा उर्जा नष्ट हुन्छ । यस्ता मानिसको आयु छोंटो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
Prevछाती किन दुख्छ ? छाती दुख्ने समस्यामा प्रयोगहुने घरायसी औषधि यस्ता छन्, जानीराख्नुहोस ।
Nextवैदेशिक रोजगार – स्वास्थ्य सतर्कता मापद-ण्डहरू पालना गर्दै अन्तराष्ट्रिय उडान सुचारू गरौँ ।’